ukudla kwesizulu – The Ulwazi Programme
Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II
Ukudla kwesintu Bese sike sandlalela kancane ngokudla kwesintu okuthandwa kakhulu, njengoba sibhunge ngamasi, sathinta nezibongo aqanjwa zona njengoba ehla esiphundu nje. Kepha ke akusiwo wodwa amasi okuwukudla kwesintu ongashaya esentwala, uncishe esingaboni. Kukhona nokunye ukumaya okumnandi esizonaba ngokuthi kuphekwa kanjani. Ugume Ugume ummbila oqothiwe, wenziwa impuphu eyomile. Ububa wumphako omuhle kabi kubantu besilisa abahamba amabanga … Read more
Categories Environment Tags ukudla kwesintu, ukudla kwesizulu